Caafimaadka ilmaha - InfoFinland
Nolosha Finland > Caafimaadka > Caafimaadka ilmaha
Finland waxaa ka jira adeeg caafimaad oo ballaaran islamarkaasna tayo leh oo loogu talaggalay carruurta. Adeegyada caafimaadka dadweynuhu waa raqiis ama waa lacag la’aan, tusaale ahaan rugaha daryeelka carruurta iyo daryeelka caafimaadka dugsiga. Waxaa kale oo intaas dheer oo la helaa adeegyo caafimaad oo gaar loo leeyahay oo fara badan.
Haddii cunuggaadu uu guri degmo ku leeyahay Finland, wuxuu xaq u leeyahay in uu isticmaalo adeegyada caafimaadka ee dadweynaha. Mararka qaar cunuggu wuxuu xaq u leeyahay in uu adeegyada isticmaalo isagoo aan xittaa lahayn guri degmo. Tusaale ahaan dadka ka yar 18 sano ee magangelyo-doonka ah wuxuu xaq u leeyahay adeegyada.
Wixii dheeraad ah ka akhriso InfoFinlandi bogga Degan Degmo ku yaalo Finland.
Haddii aad ku jirtid xayndaabka caymiska jira (sairausvakuutus) ee Finland, ilmahaaga waxaa u qaadi kartaa caymis, kaas oo daboolaya kharashaadka adegyada caafimaadka gaarka loo leeyahay.
Markii uu ilmuhu xanuunsado
Ilmaha xummadeysan ama sidoodaba xanuunsan lama geyn karo goobaha lagu xanaaneeyo. Haddii ilmo da'diisu ay ka yar tahay 10 sano uu si lama filaan ah u xanuunsado, hooyada ama aabuhu guriga ayey ilmaha la joogi karaan si ay u xannaaneeyaan. Fasaxa daryeelka carruurtu wuxuu ugu badnaan socon karaa afar maalmood. Heshiiska shuruudaha shaqada ayaa looga heshiiiyey in waqtigaas mushaar la helayo iyo inkale.
Haddii uu ilmuhu xanuunsado asagoo iskuulka ku jira, wuxuu daryeel caafimaad ka helayaa iskuulka dhexdiisa. Haddii loo baaahdo waxaa la geynayaa rugta caafimaadka ee magaalada.
Haddii ilmo xanuunsan uu cawinaada dhakhtarka ama kalkaaliso caafimaad u baahan yahay, la xiriir rugta caafimaadka (terveysasema) ee degmadaada ama xarunta dhakhaatiirta ee gaarka loo leeyahay. Rugga caafimaadka waxay furan yihiin Isiin ilaa Jimce, inta badan saacadaha u dhexeeya 8-16. Waa inaad haddiiba subaxdii wacdo rugta ganacsiga, markii xafiiska waqtiga laga qabso uu furmo. Ballan qabsashada waxaa lagu qiimeynayaa daryeelka caafimaad eed u baahan tahay.
Galbihii iyo dhamaadka usbuucaba rugaha caafimaadku way xiran yihiin, markaas xanuunada degdega ah waxaa lagu daweeyaa heeganka (päivystys). Haddii jirada cunuggu aysan u baahnayn daryeel degdeg ah, sug inta ay ka furmayso rugta caafimaadku marka xiga. Intabadan heeganka carruurta iyo dhallinyaradu waxaa lagu qabtaa xarumaha ama isbitaalada ayaga gaarka u ah.
Sidoo kale waxaad waqti dhakhtar ka qabsan kartaa xarunta dhakhaatiirta gaarka loo leeyahay. Intabadan waxay furan yihiin galbihii, sidoo kale marmarka qaarkood waxaa waqti looga heli karaa si degdeg ah. Si kastaba ha ahaatee adeega daryeelka caafimaadka ee gaarka loo leeyahay macaamiisha aad ayey qaali ugu yihiin marka loo eego adeegyada caafimaad ee guud ama ay dawladu bixiso.
Haddii aad ilmaha sumow uga shakiso, waxaad talo weydiin kartaa xarunta macluumaadka sumowga (Myrkytystietokeskus). Telefoonkeeda adeegu wuxuu furan yahay 24ka saac. Lambarka telefoonku waa (09) 471 977.
Haddii ilmaha naftiisu ay khatar ku jirto ama uu shil galo, wac lambarka gargaarka degdega ah (hätänumero) 112. Ambalasta waxaa loogu talogalay oo keliya xaaladaha khatarta ah oo isla markaasna degdegta ah. Lambarka xaaladaha degdegta ah ha u wicin xanuunada caadiga ah awgood.
Wixii macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa InfoFinlandi bogga Xaaladaha degdega ah.
Haddii uu ilmuhu jiradoFinnish | Iswidish | Ingiriis
Magdhawga daryeelka isbitaalka khaaska loo leeyahayFinnish | Iswidish | Ingiriis
Caafimaadka carruuraha yar yar
Carruurta aan weli da'da iskuulka gaarin waxaa caafimaadkooda inta badanka taxadaraya rugta daryeelka hooyada iyo dhallaanka. Cunuggu wuxuu inta badan dugsiga billaabaa sannadka uu 7 sano buuxiyo. Rugta daryeelka dhallaanka iyo hooyadu waxay caawinaysaa koritaanka iyo horumarka carruurta ee xagga jirka, maskaxda iyo bulshanimada. Carruurtu waxay xarunta hooyada iyo dhallaanka si joogto ag ugula kulmaan dhakhtarka iyo kalkaalisada caafimaadka.
Kalkaalisada caafimaadku waxay la soconaysaa horkaca ilmaha, way talaalaysaa waxayna siinaysaa macluumaadka la xiriira quudinta iyo nafaqada saxda ah. Kalkaalisada caafimaadku waxay sidoo kale ilmaha ugu tageysaa guriga haddiiba markii uu dhasho kadib.
Adeegyada xarunta hooyada iyo dhalaanka ee degmadaadu waa bilaash. Waxaad isticmaali kartaa adeegyada hooyada iyo dhalaanka ee degmadaada, haddii Finland ay kuu tahay guri degaan oo rasmi ah. Wixii macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa InfoFinlandi bogga Degan Degmo ku yaalo Finland.
Cunuggu wuxuu rugta daryeelka hooyada iyo dhallaanka ka helayaa kaarka rugta. Kaarka u sii qaado rugta daryeelka hooyada iyo dhallaanka. Kalkaalisada caafimaadka ayaa kaarka ku qoraysa macluumaadka caafimaadka iyo tallaalada cunuggaada. Magaalooyinka qaarkood waxaa laga isticmaalaa kaarka rugta daryeelka hooyada iyo dhallaanka oo elegtroonig ah.
Marka aad Finland u soo guurto ama aad degmo ku taal Finland ka guurto adigoo mid kale u guuraya, waa in aad la xiriirto rugta daryeelka hooyada iyo dhallaanka ee degmadaada cusub. Sidan waxaad ku xaqiijin kartaa, in cunuggaadu casuumaadda rugta daryeelka hooyada iyo dhallaanka oo wakhtigeeda ku timaado.
Macluumaadka adeegyada rugta la-talintaFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush
Caadimaadka ilmaha iskuulka gaarey ama iskuuleyda ah
Iskuul walba waxaa loo magacaabay dhakhtar iyo kalkaaliye/kalkaaliso caafimaad. Kalkaalisadu caafimaadka ilmaha ayey iskuulka dhexdiisa ku jeeg gareynaysaa. Kaalkaalisada caafimaadku iskuulka waxay joogtaa usbuuciiba maalmo cayiman. Ardaydu ayaga ayaa u tegi kara kalkaalisada caafimaadaka, haddii ay dhibaato haysato. Macluumaadka la xiriira daryeelka caafimaadka ee iskuulka waxaad ka heleysaa bogga internetka ee wasaarada caaafimaadka iyo arimaha bulshada (Sosiaali- ja terveysministeriö).
Dalka Finland ilmaha waxaa la siiyaa fursad looga talaalo (rokotus) cuduro badan oo la is-qabadsiiyo. Carruurta waxaa lagu talaalaa xarunta hooyada iyo dhalaanka (lastenneuvola) iyo rugta daryeelka caafimaad ee iskuulka. Talaalada ka midka ah, barnaamijka talaalka qoyska waxay u yihiin bilaash. Talaalku qasab ma ahan. Dalka Finland carruurta intooda badan waxay qaataan talaalada ka midka ah barnaamijka talaalka. U sheeg kalkaalisada caafimaadka talaalada uu cunugaadu qaatay kahor imaanshiyaha Finland.
Haddii aad dooneysid, in ilmahaagu uu helo talaal aan ku jirin barnaamijka carruurta, dhakhtarka waqti ka qabso. Dhakhtarka ayaa kuu qori kara in ilmahaaga la talaalo, kadibna kalkaaliyaha caafimaadka ayaa talaali kara ilmahaaga. Waa inaad adigu talaalka ka soo iibsataa farmashiyaha.
Barnaamijka talaalka FinnishkaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Daryeelida xanuunka waqtiga dheer ah ama ilmo curyaan ah
Waxaad codsan kartaa lacagta daryeelka gaarka ah, haddii ay tahay in aad ka qaybqaadato daryeelka ama baxnaanada cunug ka yar 16 sano ama naafo ah, sababtaas darteedna aadan u shaqayn karin. Lacagta caawimaadda gaarka ah beddelkeeda waxaad xaq u yeelan kartaa lacagta baxnaanada oo ah xilliga baxnaanada cunugga.
Lacagta daryeelka gaar kah ee caruurta ka yar 16- sanoFinnish | Iswidish | Ingiriis
Cawinaada naafada ee caruurtaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Gudniinku (Ympärileikkaus) waa wax marka la sameeyo anan dib loola noqon karin. Haddii loo sameeyo sabab anan caafimaad ahayn waa qaliin lagu faragalinayo wiilka jidhkiisa iyo xaqqa uu u leeyahay in uu lamataabtaan ahaado. Gudniinka waxa fulin kara oo kaliyaata dhakhtar sharciyaysan. Si gudniinka loo fuliyo waa in la haystaa oggolaanshaha waalidka oo qoran. Haddii ilmahu uu leeyahay labo waalid waa in la helaa labada waalidba oggolaanshohooda oo qoran. Haddii la waayo lama gudi karo wiilka. Wiilku waxa uu xaq u leeyahay in uu diido gudniinka.
Lama gudi karo ilmaha isagoonan kahor uunan dhakhtarku kababyaynin. Waana in lagu sameeyaa jawi steriil ah ama ka nadiif ah jermiska oo dhan oo la maamulo, sida isbitaalada qolalkooda qalliinka oo kale. Gudniinka anan loo samaynin sabab caafimaad ma aha wax xarumaha caafimaadka ee degmooyinka iyo dowladu leedahay wax lagu samayn karo, waana in uu qofku lacgta iska bixiyaa isagu.
Macluumaad faahfaahfan oo ku saabsan gudniinka waxad waydiin kartaa xarunta hooyooyinka iyo dhallaanka, dhakhtarka xaruntaada caafimaadka, kalkaalisada iskuulka ama dhakhtarka iskuulka.
Gudniinka qodban ee gabdhaha
Gudniinka qodban ee xubnaha taranku wuxuu sababaa dhibaatooyin caafimaadka oo daran islamarkaasna noocyo badan wuxuuna sidoo kale inta badan halis ku yahay caafimaadka xittaa marka la qaangaaro. Qodbiddu waxay sidoo kale cunugga gelisaa cabsi waana waayo-aragnimo argagax leh.